‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को ल’फ’डा, युवाहरु आ’क्रो’समा कसले लगायो ताला ? ( भिडियो सहित):: Mero Desh
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को ल’फ’डा, युवाहरु आ’क्रो’समा कसले लगायो ताला ? ( भिडियो सहित)
Published on: २४ श्रावण २०७८, आईतवार ०८:३९
काठमाडौ । नेपालकै ठूलो शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को शनिबार रा’ती फाइनलपछी भ्वाइसले बिजेता घोषणा गरेको छ। भ्वाइसले अमेरिका निवासी किरण गजमेर बिजेता भएको घोषणा गरेको थियो।तसर्थ किरण बिजेता भए सँगै, सामाजिक’ सन्जालमा विभिन्न टी’का टिप्पणीहरु देख्न सकिन्छ।
बिजेता घोषण गरे सँगै भ्वाइसको कार्यक्रम स्थलमा केही यु’वाहरु गएर ‘लफ’डा गरेका थिए । पै’सावा’ल र सम्पती हुनेहरुलाइ मात्र भित्र स्टेजमा प्रबेश गराइयो तर हामिलाइ प्रबेश गराइएन भन्दै ती यु’वाहरुले आ’क्रो’श पोखे। ती नै युवाहरुले भ्वाइसको कार्यक्रम स्थलमा ताला लगाएर चाबी समेत आफ्नै हातमा कब्जा गरेर
कोचहरु सहित बाहिर परेका थिए। त्यसै भिडमा कोच प्रमोद खरेल फोनमा बोलिरहेको देखिए । ती युवाहरुले आफ्नो रोजाइको प्रतिस्पर्धिलाइ एक जना बराबर ५ हजार सम्मको भोट गरेको बताए । आ’क्रो’सित यु’वाहरुलाइ प्रहरिले समेत रोक्न सकेन। पूरा समाचार तलको भिडियो मा हेर्नुहोस्!